Mpanamboatra leherina - Mpamatsy sy orinasa fanondrana entana any Sina
Lehiben'ny mpahandro an'ny lefom-pisakafoanana eo amin'ny lefom-pisakafoanana CU504S161000T4
Ny marika CHECKEDOUT Item Code CU504S161000T4 TAMINY SAIZY Ny teny fototra amin'ny chef fanamiana fanamiana, lohany amin'ny lohany, loham-pianakaviana, akanjo ho an'ny hopitaly Fabric 60/40 poly / cotton GSM.143g Xinjiang Aksu vita amin'ny lava-bato, tsy-pilling, tsy mihemotra, tsy misy karazan-kasina, Ny fiainana fanompoana dia in-2 toy ny akanjo chef mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny henany ...
Toeram-pisakafoanana ao amin'ny lakozia mpahandro an-dakozia U502S1100A
Marika CHECKEDOUT Item Code U502S1100A Lehilahy SAIZITRA Teny fototra ny kojakojan'ny mpahandro an'ny chef waiter, loham-balahin'i Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu vita amin'ny landy lava, tsy misy ondana, tsy mihemotra, tsy misy karazan-tsakafo, ny fiainana fanompoana dia in-2 toa akanjo chef mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, tsara ny fanoherana ny abrasion, l ...
Toeram-pisakafoanana amin'ny mpahandro an-dakozia ao an-dakozia U501S0100A
Marika CHECKEDOUT Item Code U501S0100A habe MISY AZONY Ny teny fototra amin'ny kojakoan'ny mpahandro an'ny chef waiter, loham-balahin'i Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu landihazo lava, tsy misy ondana, tsy mihemotra, tsy misy karsinogens, fiainana ny serivisy 2 heny akanjo chef mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, tsara ny fanoherana ny abrasion, l ...
Toeram-pisakafoanana ao amin'ny lakozia mpahandro an-dakozia U503S0100A
Marika CHECKEDOUT Item Code U503S0100A Lehilahy SAIZITRA Teny fototra ny kojakojan'ny mpahandro an'ny chef waiter, loham-balahin'i Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu landihazo lava, tsy misy ondana, tsy mihemotra, tsy misy karsinogen, ny fiainana fanompoana dia in-2 toa akanjo chef mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, tsara ny fanoherana ny abrasion, l ...
Toeram-pisakafoanana ao amin'ny lakozia mpahandro an-dakozia U501S0200A
Marika CHECKEDOUT Item Code U501S0200A Lehilahy SAIZITRA Teny fototra ny kojakojan'ny mpahandro an'ny chef waiter, loham-balahin'i Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu vita amin'ny landy lava, tsy misy ondana, tsy mihemotra, tsy misy karsinogen, ny fiainana fanompoana dia in-2 toa akanjo chef mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, tsara ny fanoherana ny abrasion, l ...
Toeram-pisakafoanana ao amin'ny lakozia mpahandro an-dakozia U503S0200A
Marika CHECKEDOUT Item Code U503S0200A Lehilahy SAIZITRA Teny fototra ny kojakojan'ny mpahandro an'ny chef waiter, loham-balahin'i Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu landihazo lava, tsy misy ondana, tsy mihemotra, tsy misy karazan-tsakafo, ny fiainana fanompoana dia in-2 toa akanjo chef mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, tsara ny fanoherana ny abrasion, l ...
Toeram-pisakafoanana ao amin'ny lakozia mpahandro an-dakozia U501S0400A
Marika CHECKEDOUT Item Code U501S0400A Size ONE SIZE Ireo teny fanalahidy chef waiter accessories, lohany lefy Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu landihazo lava vita, tsy misy ondana, tsy mihemotra, tsy misy karsinogen, ny fiainana fanompoana dia 2 heny akanjo chef mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, tsara ny fanoherana ny abrasion, l ...